Praziquantel : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Praziquantel ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Praziquantelကိုကပ်ပါးကောင်များ(ဥပမာSchistosoma and liver flukes)ဝင်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ရောဂါတွေကိုကုသဖို့အတွက်သုံးပါတယ်။ ကပ်ပါးကောင်ဝင်ခြင်းရောဂါတွေကိုကုသခြင်းဟာသင့်ကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုဘဝကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။Praziquantel ဟာantihelminticsလို့ခေါ်တဲ့ဆေးအုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။၎င်းဟာကပ်ပါးကောင်တွေကိုသတ်ပေးပါတယ်။၎င်းဟာကပ်ပါးကောင်တွေကိုလှုပ်လို့မရအောင်လုပ်ပေးခြင်းကြောင့်ကပ်ပါးကောင်တွေဟာသွေးကြောတွေပေါ်မှာကပ်မနေနိုင်တော့ဘဲခန္ဓါကိုယ်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုသဘာဝအတိုင်းရှင်းလင်းပစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ယခုဆေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအစာနဲ့တွဲပြီးတစ်နေ့ကိုသုံးကြိမ်(၄နာရီမှ၆နာရီလောက်ခြားသောက်ရန်)နဲ့တစ်ရက်သောက်ပါ။ ဆေးပြားများသို့မဟုတ်ဆေးခြမ်းများကိုရေတစ်ဖန်ခွက်နဲ့(၈အောင်စသို့မဟုတ်၂၄၀မီလီလီတာ)မြန်မြန်သောက်ပါ။ ဆေးကိုဝါးစားခြင်း၊ငုံထားခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်Praziquantel ဆေးပြားရဲ့ခါးတဲ့အရသာကသင့်ကိုပျို့အန်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကယခုဆေးကိုတစ်နေ့သုံးကြိမ်အောက်လျှော့ပြီးသို့မဟုတ်တစ်ရက်ထက်ပိုပြီးသောက်ခိုင်းတာမျိုးလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာပါ။
ဆေးပမာဏဟာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ဆေးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဆေးပြားတွေမှာအမှတ်အသားတွေရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆေးပမာဏကိုရရှိဖို့အတွက်ဆေးပြားကိုချိုးဖဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ဆေးပမာဏရရှိအောင်ဆေးပြားကိုဘယ်လိုချိုးဖဲ့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းပါ။
Praziquantelကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Praziquantelဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ချက်များလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Praziquantelကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Praziquantel အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Praziquantelကိုအသုံးမပြုခင်သင့်မှာယခုဆေးနဲ့သို့မဟုတ်အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်မတည့်တာမျိုးတွေရှိရင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။ ယခုဆေးမှာဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တာတွေသို့မဟုတ်တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတတ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။
သင့်မှာအချို့ရောဂါအခြေအနေတွေရှိပါကယခုဆေးကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့သင့်မှာမျက်လုံးထဲကိုကပ်ပါးကောင်ဝင်တဲ့ရောဂါ(ocular cysticercosis)ရှိပါကယခုဆေးကိုအသုံးမပြုခင်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ယခုဆေးဟာဆေးသောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မတိုင်ခင်အထိသင့်ကိုမူးဝေခြင်း၊အိပ်ငိုက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ အရက်နဲ့ဆေးခြောက်တွေသုံးမယ်ဆိုသင့်ကိုပိုပြီးမူးဝေစေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်သေးသ၍ကားမမောင်းပါနဲ့။ စက်တွေကိုအသုံးမပြုပါနဲ့။ နောက်ပြီးအမြဲတမ်းနိုးကြားတက်ကြွနေရန်လိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့။ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်ဆေးခြောက်တွေသုံးနေတယ်ဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ယခုဆေးဟာမိခင်နို့ရည်ထဲကိုပါသွားနိုင်ပါတယ်။ ယခုဆေးကိုသုံးနေစဉ်ကလေးနို့တိုက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့မိခင်တွေအနေနဲ့ယခုဆေးသောက်တဲ့နေ့နဲ့ဆေးနောက်ဆုံးအကြိမ်သောက်ပြီး၇၂နာရီအတွင်းမှာကလေးနို့တိုက်ခြင်းကိုခဏလောက်ရပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာမိခင်နို့ရည်ကိုညှစ်ထုတ်ပြီးစွန့်ပစ်ပါ။
Praziquantel ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPraziquantelကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့် Bလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Praziquantel ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မူးဝေခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်း၊ပျို့ခြင်း၊မောပန်းခြင်း၊အားနည်းခြင်း၊အဆစ်နဲ့ကြွက်သားများနာခြင်း၊ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊အန်ခြင်းနဲ့ချွေးထွက်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာအများအားဖြင့်အပျော့စားဖြစ်ပြီးသင့်မှာကပ်ပါးပိုးဝင်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာသို့မဟုတ်သေသွားတဲ့ကပ်ပါးကောင်တွေကြောင့်ရတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလက္ခဏာတွေဆက်ရှိနေပါကသို့မဟုတ်ပိုဆိုးလာပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။
Praziquantel နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အခြားဆေးတွေကသင့်ခန္ဓါကိုယ်ကနေpraziquantelစွန့်ထုတ်ခြင်းကိုသက်ရောက်နိုင်ပြီးpraziquantel အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်azole antifungals (ဥပမာitraconazole,ketoconazole)၊chloroquine, cimetidine, dexamethasone, macrolide antibiotics (ဥပမာ erythromycin), rifamycins (ဥပမာ rifampin), St. John’s wortနဲ့ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကိုကုတဲ့ဆေးတွေ (ဥပမာ carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, primidone)
Praziquantelကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Praziquantel နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Praziquantelဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
Praziquantel ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Hymenolepsis nana ကပ်ပါးပိုးဝင်ခြင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
-ဆေးပြားမှာအမှတ်၃ခုပါပါတယ်။ ဆေးခြမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုpraziquantel ၁၅၀မီလီဂရမ်ပါပါတယ်။ ဆေးပြားပေါ်ကအမှတ်တွေကိုလက်သည်းနဲ့ဖိခြင်းအားဖြင့်ဆေးပြားကိုခြမ်းလို့ရပါတယ်။ ဆေးရဲ့လေးပုံတစ်ပုံရဖို့အတွက်ဆိုဆေးရဲ့အပြင်ဘက်ခြမ်းကအပိုင်းကိုချိုးရပါမယ်။
Hymenolepsis nana ကပ်ပါးပိုးဝင်ခြင်းအတွက်ကလေးသောက်ရန်ဆေးပမာဏ
Praziquantelဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Praziquantel Dosage. https://www.drugs.com/dosage/praziquantel.html. Accessed April 9, 2018.
Praziquantel Tablet. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8873/praziquantel-oral/details. Accessed April 9, 2018.